Homeसमाचारशिल्पालाई छेउमा राखेर खरो उ’त्रिइन् करिश्मा, प्रकाश र छविलाई दिइन् यस्तो चेता’वनी (भिडियो हे’र्नुहोस)
April 24, 2021 admin समाचार 3934
नायीका शिल्पा पोखरेले अब आफु काममा मात्र के’न्द्रित हुने बताएकी छन् । आफ्ना बारेमा सामाजिक स’ञ्जाल र मिडियामा आएका कुरालाई ध्यान नदिएर काममा केन्द्रि’त हुने उनले बताइन् । नयाँ म्युजिक भिडियोको प्रमो’शनका लागि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा स’हभागी भएकी शिल्पाले यस्तो बताएकी हुन् । उनी श्रीमान छवि ओझाका कारण अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा’मा छन् । छविले शिल्पाका बारेमा कुरा गर्दै मिडियावाजी गरेका कार’ण उनको चर्चा भएको छ ।
उनी आफ्ना पति छवि ओझासंगको सम्बन्ध विच्छे’दको मु द्दा का विषयमा चर्चामा रहेकी हुन् । टेलिभिजन कार्य’क्रम सञ्चालक प्रकाश सुवेदीले उनका बारेमा कार्यक्रम निर्मा’ण गरेपछि शिल्पाले आफ्ना बारेमा मनगढ’न्ते कुरा उल्लेख गरेर ब्यक्तिगत जिवनका बारेमा समाचार बनाएको भन्दै वि’रोध गरेकी थिइन् । उनले दिएको उजु’रीका कारण एपीवान टेलिभिजनवाट प्रशारण हुने रजतपट कार्यक्रम निल’म्बनमा परेको छ ।
शिल्पाले आफ्ना बारेमा नराम्रो सोच्ने’हरुका बारेमा चिन्ता नलिने बताएकी छन् । म एउटा कानवाट सुनेर अर्को कानवाट उडाइ’दिनुपर्छ भन्ने ठानेर हाँसिरहेकी छु, शिल्पाले भनिन् । संगै रहेकी करिश्माले सबै कुरालाई सका’रात्मक रुपमा लिने बताइन् । जिवन नै अनि’श्चित भएको बेलामा भौतिक शरिरका लागि यस्तो सं’घर्ष गर्न आवश्यक नभएको बताइन् । उनले जुन उद्योगमा छु त्यसका बारेमा नरा’म्रा कुरा गर्न नहुने करिश्माको भनाई छ ।
करिश्माले अदालतमा विचारा’धिन भएको विषयमा अनावश्यक रुपमा अरुले टिप्प’णी गर्न नहुने बताइन् । सम्झना परियारले शिल्पालाई सहयोग गर्दै आएकी छन् । टेलिभिजनमा प्रशारण रो:क्का गरिएको रजतपट प्रकाशले युट्युव मार्फत प्रशा’रण गरेपछि त्यस विरुद्ध पनि जाने सम्झनाले बताइन् । उनले पोको पारेको किताव गीता भन्दै झु टो कसम खाएको आ’रोप लगाइन् ।
December 26, 2020 admin समाचार 6930
December 11, 2020 admin समाचार 6681
April 18, 2021 admin समाचार 4550
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217745)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216802)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (214200)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182564)